काठमाडौँ । कांग्रेसको काठमाडौं महानगर समितिले वैशाख ७ मा नगर प्रमुखका लागि पाँच जनाको नाम सिफारिस गर्दा पहिलो नम्बरमा नीलकाजी शाक्य र पाँचौं नम्बरमा प्रगतिमान रन्जित थिए । पार्टीको गत असोजमा सम्पन्न नगर अधिवेशनमा सिंह समूहमा रहेका शाक्य अर्को समूहका रन्जितलाई पराजित गरेर महानगर सभापति बनेका थिए ।
नेता अधिकारी यही कारण आगामी संसदीय निर्वाचनमा समेत सिंहलाई असजिलो हुने बताउँछन् । सिंह काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र १ बाट चुनाव लड्दै आएका छन् । उक्त क्षेत्रमा महानगरका वडा नं. १०, ११, २९ र ३१ पर्दछन् । यी वडाको मत परिणामले सिंहलाई पनि झस्काएको छ । चारवटै वडामा कांग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ८ हजार १ सय ६६ मत ल्याउँदा नगर प्रमुखमा कांग्रेसकी श्रेष्ठले ६ हजार ८ सय १६ मत ल्याएकी छन् । चारवटै वडामा कांग्रेसका वडाध्यक्ष विजयी भएका छन् । बानेश्वर क्षेत्र (वडा नं. १०) मा त कांग्रेसका वडाध्यक्ष उम्मेदवार रामकुमार केसीभन्दा श्रेष्ठको मत झण्डै आधा कम छ । ‘यसरी उहाँ (सिंह) कै क्षेत्रमा कांग्रेसका मतदाताले अन्यत्र मतदान गर्ने अवस्था आउने हो भने भोलिको चुनाव थप जोखिमपूर्ण हुने देखिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसैले यसपटकको चुनावले काठमाडौंमा कांग्रेसलाई भन्दा बढी धक्का उहाँलाई पारेको छ ।’
पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका सिंहले तेस्रो नम्बरमा परेपछि दोस्रो चरणमा देउवालाई समर्थन गरेका थिए । त्यसयता देउवा–सिंह सम्बन्ध न्यानो बन्दै आएको छ । यही सम्बन्धको कारण काठमाडौंमा श्रेष्ठलाई टिकट पाउन सहज भएको थियो । तर वर्षौंदेखि निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय नेतालाई टिकट दिनुको साटो श्रीमतीलाई टिकट दिँदाको परिणामले सिंह नैतिकताको प्रश्नले घेरिएका छन् । ‘भविष्यमा यही प्रश्नले उहाँलाई कमजोर बनाउँदै लग्नेछ,’ कांग्रेस नेता अधिकारी भन्छन्, ‘हिजो प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्ने नेता (गणेशमान सिंह) को परिवारकै सदस्यहरू पदलोलुप भएको आरोपले पनि असर पार्नेछ ।’ -कान्तिपुर दैनिकबाट